Ma waxaad tahay qof taageere weyn u ah songs Adele ayaa? Haddii ay haa tahay, waxaad aan ka maqnaan karaa iyada 10ka albums hoos ku qoran. Iska hubi.
Mid ka mid ah: 21
Ka dib markii ay kor album ah u saftay guulo shaqo adag, email Duffy wixii faahfaahin dheeraad ah. Adele lahaa dhibaatooyin sida in kastoo iyo album this sii daayay bishii January ee 2011 kaxaystay oo mustaqbalkiisa ciyaareed si heer kale. Waxaa cadaatay in ay gabal aad shakhsi ahaaneed ee shaqada sida Adele ayaa la qoraal heeso ka dib markii uu kala ninkeeda. Anger, aargoosiga, jabka, is-baaro iyo Dambi Dhaaf oo dhan iftiimi iyada oo in this album weyn. Tracks sida 'qof sida Waxaad' iyo 'Rolling moolka ku jira' dhigay UK ee iibinta album ugu weyn ee qarnigan.
Movies Bond ayaa soo saaray qaar ka mid ah Gurtida theme classic ka badan konton sano ee lasoo dhaafay iyo Adele ayaa kaalin waa xaq waxaa la mid aad ugu fiican. Fursadda si ay u qoraan a song theme Bond ayaa sidoo kale Adele fursad ay ku gaaraan dad cusub oo Dhab ahaan ma yeeli iibka album iyada. Written by Adele iyo Paul Epworth "Skyfall" qabsada ah niyadda iyo qaabka mawduucyada hore Bond. Waxaa ku dhawaad ​​abuuray taariikh aad u gaaray tiro laba gooldhalinta UK, laakiin weli ma theme Bond ayaa tiro ka mid ah.
Album u saftay in bilaabay Adele ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed oo guulo. Sii daayay sanadkii 2008 waxaa kaalinta koowaad ee gooldhalinta UK oo iyada ku guuleystay abaalmarinta Grammy ee Best New Artist. Album ayaa u qalmo ka dib u eegista wanaagsan in ay ka heshay dhaleecayn ku nool dunida ee sida ay ku tageen inay iska iibiso ka badan 7 milyan oo nuqul. Run ahaantii xiddiga A waxa uu ku dhashay markii waxaas la sii daayay.
Afar: Qof Like Waxaad
Mid ka mid ah heesaha ugu shakhsi iyada '21' album, waxyiga xiriirka ka jabay iyo sida ay u yimaadeen in ay la eego waxaa la. Hal labaad ka album iyo waxa ay noqotay iyada tirada UK ugu horeysay hal. Taageerayaasha kuma caawin karo dhacayay jacayl gabay ah ka dib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah ee 2011 hay'adda nabadsugida Awards. Song wadnaha-jabiyay ayaa qoreysa kaliya Adele iyo biyaano ah, wax yar oo kale ayaa loo baahan yahay si ay tani u noqon hal hit cajiib ah oo adduunka ah. Waxaa la codeeyay hal saddexaad ee ugu jecel yahay oo ka mid ah 60 sanno ee ugu danbeysay ee UK.
Shan: Laamiyo dabagalka
Her hal labaad ka '19' ayaa la sii daayay bishii January ee 2008, gaareen tiro laba UK iyo Adele iyadii siiyey 40 sareysa hit hore ee Maraykanka. Waxaa iyada ku guuleystay abaalmarinta Grammy ee Best Female Pop Vocal Performance. Waxa ay ahayd hees kale oo macnihiisu shakhsi ah oo weyn oo qoraal ah ka dib markii uu soo ban saaxiib hore khiyaameeyay iyada si ay isaga ku dhacay oo helay chucked ka mid ah baar ah. By markii ugu Adele guriga ka helay iyada lahaa ku qoran inta badan taasi hit classic.
Lix: Garabka Cold
Hal saddexaad ka Adele ayaa album ugu horeysay ee la sii daayay bishii March ee 2008-ka duwan heesaha kale ee album ayaa waxaa la soo saaray Mark Ronson. Waxaa qoreysa lyrics cajiib ah sida: ". Ha noqon igu wareegsan on sida ay tahay wax aanan eed ku eeg waan arki kartaa sugaya in aad indhaha ka mid ah in igu laayey mar kasta oo.." Waxa kale oo song si qoto dheer shakhsi ka oo gabayaa ahaa, kuwaas oo ay u muuqato ma lahayn in nasiib badan ee xiriirka laakiin loo isticmaalo oo musiiba ah in si buuxda in ay iyada faa'iido.
Toddoba: dab roobka
Tani hal ka '21' oo kaliya ay gaareen tiro 11 ee UK. Qof kasta waxaa la horey u iibsato heestii by sackload ah. Waxaa siiyey Adele iyada tiro oo isku xigta saddex meelood mid ka mid ah Maraykanka oo ahaa hit weyn oo caalamka ah. Waa Adele isku dayaya Balcad awood leh deyr dhawaaqa marka la barbar dhigo heeso kale furteen hoos ku albums iyada. Adele ayaa sheegtay inay heshay fikrad gabaygii, marka iyada sigaarka lagu shido shaqeeya markii ay qoyan joojiyay.
Siddeed: aad dareentid My Love
A cover version dhif by Adele oo lagu soo daray iyada album u saftay. Waxaa qoray Bob Dylan ee 1990 ayaa lagu diiwaan heesaa dhowr ah ay ka mid yihiin Billy Joel iyo Garth Brooks. Waxa uu noqday hal shanaad in lagu sii daayo off '19' iyo soo gaadhay tiro 26 ee gooldhalinta UK ee 2008. Waxaa dib ugu soo laabtay gooldhalinta ee dhowr jeer ay sabab u tahay caanka ah doorasho song for tartamayaashu ku saabsan 'X-Factor' iyo 'Britain ee Got Talent ", oo ku dhuftay toban kooxood ee ugu sareysa 2010. all song uu ku qaatay 56 todobaad ee ugu sareeya UK 75.
Sagaal: magaaladiisa ha ku ammaanmo
Tani waa meesha ay kulligood waxay bilaabeen inay u Adele, song ugu horeysay in ay u qoray. Waxaa iyadii ka soo kexeeyey oo dhan toban daqiiqo in uu qoro ka dib markii hooyadeed isku dayay in uu iyada ka dhaadhiciyo inuu ka tago magaalada guriga ee West Norwood ee London oo taga si aad jaamacadda. Waxaa markii hore la sii daayay sida xaddidan kaliya 7 "floorka ee 2007 la koobi oo kaliya 500 oo la heli karo. Song ayaa ugu danbeyn noqday hal saddexaad ka '19' iyo helay magacaabista Grammy ah Best Female Pop Vocal Performance badiyay baxay in Beyonce ee Halo. '
Toban: rogid moolka ku jira
Tani hit weyn kaalinta shaxda in kow iyo toban wadan oo dunida dacaladeeda, laakiin waa hees in la yaabay Adele. Waxay qirtay in ay jiraan qoraalo in this song iyadu marnaba ogaa in ay gaari karaan. Heesta oo ka koobnaa halka Adele ahayd booqasho ku jooga dalka Maraykanka iyo waxaa uu ku dhiiraday darawal bas safar. Waxaa Adele iyo lammaanahaaga song-qoraal Paul Epworth qaaday galabta ah si uu u dhameystiro. Iyada oo ay injiilka ku xidha song wuxuu noqday crossover weyn ka dhacay dalka Maraykanka ka iibiyaan ka badan todoba milyan oo nuqul.
> Resource > Top List CD Qaasaali Taageerayaasha> 10 Adele ayaa Waa Leedahay